Soosaaraha Qalabka Shiinaha Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Kunda
Qalabka birta waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro feeraha qabow, dhimashada foojarka kulul, dhinta tuurista iyo noocyada kale ee birta ah.Mould waa aaladda ugu weyn ee loogu talagalay soosaarka qaybaha qaybaha warshadaha sida soo saarista mashiinnada, qalabka raadiyaha, matoorrada iyo qalabka korontada. Dhimashadu waxay si toos ah u saameysaa tayada tiknoolajiyada farsameynta cadaadiska, saxnaanta wax soo saarka wax soo saarka iyo qiimaha wax soo saarka, iyo tayada iyo nolosha adeegga dhimashada marka lagu daro qaabeynta qaabdhismeedka macquulka ah iyo saxsanaanta wax soosaarka, oo inta badan ay saameeyeen waxyaabaha dhimanaya iyo daaweynta kuleylka.
Qalabka birta ah ayaa qiyaas ahaan loo qaybin karaa: birta dhimatay oo qabow duudduuban, birta kulul ee duudduuban ee kulul iyo birta birta u dhinta saddex nooc, oo loo adeegsado been abuur, shaabbadaynta, goynta, dhimista shubka iyo wixii la mid ah. xaaladuhu way adag yihiin, sidaa darteed birta caaryada, sida ku cad xaaladaha shaqada ee caaryada, waa inay lahaato adkaansho sare, xoog, iska caabbin, adkeyn ku filan, iyo sidoo kale adkaansho sarreysa, adkeyn iyo waxqabad kale. kala duwan, xaaladda shaqada waa adag tahay, sidaa darteed in la dhinto codsiga waxqabadka birta sidoo kale waa ka duwan yahay.
Barka bir-caaryada / Biraha birta birta / Birta caaryada birta: Birta dhinta waa nooc ka mid ah birta loo isticmaalo sameynta dhimashada qabow, been abuurka kuleylka ah ayaa dhinta, dhimashadda tuurista ayaa dhinta iyo kuwo kale oo dhinta. Caaryadu waa aaladaha ugu muhiimsan ee wax soo saarka qaybaha warshadaha sida soo saarista mashiinada, qalabka raadiyaha, matoorrada, qalabka korontada, iwm.
nadiif ah / madow qallafsan / milled / shiidi rinji iwm.
Waraaq aan biyuhu lahayn, iyo bir bir ah oo la galiyay. Xidhmada Joogtada ah ee Xidhmada Seaworthy Xidho noocyada kala duwan ee gaadiidka, ama sidii loogu baahdo
7-10 maalmood oo shaqo gudahood kadib helitaanka lacagta
warshadaha kiimikada, warshadaha maraakiibta, warshadaha wax soo saarka,
dhismaha, qurxin Warshadaha, awoodda korantada, mashiinnada mashiinka,
alaabada nadaafada, gacmaha alaabta guriga, kululeeyaha, heerkulka sare
adkaysi u leh, heerkulkeedu hooseeyo, daxalka u adkaysta.
30% (Lacagta T / T)
Hore: Ulaha Kaarboonka